UMGAQO WE-ETIQUETTE YESIPHO SOMTSHATO ESIFIKAYO: INTO EKUFUNEKA UYAZI - IZIPHO
Eyona Izipho Ngaba kufuneka uthenge iSipho soMtshato soMtshato ukuba ubhatalela uKhenketho?
Ngaba kufuneka uthenge iSipho soMtshato soMtshato ukuba ubhatalela uKhenketho?
Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana. UMartin Corr / iShutterstock
Ukuhlaziywa kwe-Aug 19, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Umtshato oya kuyo sisizathu sokonwaba ngeholide. Yintoni engcono kunokubona abantu ababini obathandayo bathembisa izifungo kwindawo entle? Oko bekuthethile, ukuya kumtshato omde okude akubizi kakhulu- ngakumbi ukuba ufuna ukubhukisha inqwelo moya kunye nehotele. Zonke izinto eziqwalaselweyo, unokushiyeka uzibuza ukuba awusidingi ukuthenga isipho somtshato oya kwindawo oya kuyo. Ngethamsanqa, siyicacisile Imilinganiselo yokuziphatha yesipho kwiindwendwe uyazi ke ngokuchanekileyo okulindeleke kuwe. Siphinde sakhangela kwiwebhu ukufumana izipho ezikumxholo eziza kothusa kwaye zonwabe kwisibini esonwabileyo.
Ngaba iindwendwe zokuya eMtshatweni ziya kuthenga izipho?
Izipho Zomtshato Wokuya Kwesi Sibini
Ukuba umenyiwe kumtshato oya kuyo, lo mbuzo unokuba usitsha ngasemva kwengqondo yakho: Ngaba kusafuneka uthengele esi sibini isipho somtshato, nangona sele uhlawula imali yokuya kwindawo yabo yomtshato? Impendulo emfutshane nguewe.
Siyaqonda ukuba ukuba lundwendwe oluhle kunakho konke ukuhlawula ityala. Kodwa nokuba kubiza malini ukuba lundwendwe lomtshato, inembeko (nangona kungafuneki kwezobuchwephesha) ukunika isipho somtshato. Kodwa musa ukuziva isidingo sokuntywila kwitikiti elikhulu lobhaliso lwento emva kokuhlawula iinqwelomoya eMorocco. Ukuba sele ukhathazekile malunga neendleko zokuhamba, zive ukhululekile ukukhetha isipho esithobekileyo kuludwe lweminqweno yesi sibini.
Oko kwathethi, ezinye izibini ziya kucela iindwendwe zazo ukuba ziyeke izipho zomtshato. Kule meko, ngokuqinisekileyo awudingi ukuthenga sipho, kodwa kusafuneka uthumele iswiti ikhadi lomtshato .
Ngaba kufanelekile ukuba uthathe isipho sakho uye kuMsitho woMtshato okanye usithumele esi sibini?
Ngaphandle kokuba esi sibini sicele ngokucacileyo izipho eziziswe kwindawo esiya kuyo, ngekhe zifune ukuhlawula imirhumo eyongezelelweyo yomthwalo wokuzisa zonke izipho ekhaya. Endaweni yoko, uninzi lobhaliso (kubandakanya i-Knot Wedding Registry), lwenza kube lula ukuhambisa izipho kwidilesi yasekhaya yesi sibini, lukhetho olufanelekileyo kuye wonke umntu obandakanyekayo. Ngaba isipho sithunyelwe kwisibini ngaphambi komtshato wabo okanye ixesha lokuba sifike emva nje kokuba bebuyele kuhambo lwabo. Oku kubandakanya izipho zemali (ezingaphezulu kule ingezantsi).
Ngaba Ungayinika Imali Ngomsitho Wokundwendwela?
Ngokuqinisekileyo. Njengawo nawuphi na umtshato, izipho zemali emitshatweni oya kuyo azisekho. Ngapha koko, uninzi lwabantu abatshatileyo bayakwamkela ukuba nemadlana abayisebenzisayo kwizinto abazithandayo. Amaqabane amkela isipho semali ahlala emisela ingxowa mali, okanye abanye banokubhalisela izipho ezinamava abanokuzonwabela kwiholide yabo yasemva komtshato nangaphaya.
Ngaba kufanelekile ukuba usithumele isipho ukuba awuyi kuMsitho woMtshato?
Xa abantu abatshatileyo bethumela izimemo zabo zomtshato kumtshato waphesheya, bayazi ukuba ayingabo bonke abamenyiweyo abaza kukwazi ukuwenza-kwabanye, akunakwenzeka. Ukuba awukwazi ukuya kumtshato oya kuyo nangasiphi na isizathu, yinto entle yokuthumela isipho endaweni yobukho bakho. Unokukhetha into enomdla kwirejista yabo.
Indawo yokuqala ekufuneka ujonge kuyo xa uthenga isipho somtshato ihlala irejista yomtshato wesibini. Ukuba babhalisile kunye neNqaku, ungasebenzisa isixhobo sethu sokukhangela esilula ukufumana irejista yabo kunye nokusebenzisa ivenkile yethu yobhaliso. Ukuba awukwazi ukuthenga kwirejista nangasiphi na isizathu, kuyanceda ukucinga malunga nezinto abazithandayo kunye nezinto abanomdla kuzo. Uyazi ukuba banomtshato oya kuyo, ke ngoku bayakuthanda ukuhamba-kutheni ungabathengeli into yokubakhuthaza? Ukukunceda ukukhomba kwicala elifanelekileyo, siqokelele izipho ezifanelekileyo zomtshato ezantsi.
Indawo yokuPrinta uMtshato
Nokuba umtshato ubanjelwe eJamaica, eMexico okanye nakweyiphi na indawo eselunxwemeni, olu shicilelo lwesitayile se-Retro yinto esi sibini esiya kuyigcina iminyaka ezayo. Unokwenza ngokusesikweni ukuprintwa okufakwe kwindawo yabo yomtshato, amagama kunye nomhla womtshato.
Ukusuka kwi- $ 300 | Iimpahla ezingaqhelekanga
Ukuhamba kweChic Cabin
Emva komtshato, abantu abasandul 'ukutshata baya kufuna ixesha lokudideka. Bancede bafumane ukuphumla kwaye yanelise ukujikeleza kwayo ngekhadi lesipho seGetaway. I-Getaway ibonelela ngokubaleka okugcwaliswe ngokwendalo kwiikhabhathi ezincinci ezinamachaphaza ajikeleze i-US, ke ikhadi lesipho liya kuvumela esi sibini ukuba sithathe ikhefu nanini na (naphina) xa bethanda.
Ukusuka kwi- $ 100 | Phuma
Limnandi kangakanani ikhandlela lemephu yomtshato elungiselelwe wena? Xelela nje umthengisi amagama esi sibini, umhla womtshato kunye nendawo yomtshato kwaye baya kuyenza yonke le nto.
Ukuhamba konke malunga nokwenza iinkumbulo, kwaye yeyiphi indlela ebalaseleyo yokubamba ezo nkumbulo ngaphandle kweGoPro? Qiniseka ukuba uthumele esi sipho ngaphambili bayaya emtshatweni ukuze bakwazi ukuyipakisha xa besiya kwiholide yabo.
$ 380 | Ivenkile yeKnot Registry
Ukufumana isipho somtshato esiya kwindawo ephindwe kabini njengenyanga emnandi yasemva komtshato, singacebisa ukuba le seti yolwandle yenziwe ngokwezifiso? Iseti yeetawuli ezine iyafumaneka ngemibala emine eyahlukeneyo kwaye iitawuli zinokuhonjiswa ngamagama wazo, ileta okanye igama elitsha lomtshato ukuba babelana ngayo.
Ukusuka kwi- $ 230 nge-4 | Weezie
Ikhithi yeCocktail yeKhenketho
Ukuba uthenga isipho se-cocktail connoisseurs, baya kuthanda ezi kitshi ze-cocktail. Ibhonasi: Iikiti zincinci ngokwaneleyo ukuba zingapakisha kude kwisutikheyisi yazo ukuba zithathe Ikhefu lomtshato .
$ 70 | Etsy
Iklabhu yeKofu yokubhaliselwa
Khuthaza isibini ukuba sihambe sisebenzisa incasa yaso kunye neenyanga ezintathu zeAtlas Coffee Club. Nyanga nganye, baya kuthunyelwa ibhegi yekofu kwiindawo ezinjengeTanzania, iKenya okanye iColombia, kunye neposikhadi evela elizweni kunye neengcebiso malunga nokupheka.
$ 60 | Iklabhu yekofu yeAtlas
Ukutshata apho usiya khona luphawu oluqinisekileyo lokuba isibini siyakuthanda ukuya eholideyini, ngoko ke banike imithwalo yasemva komtshato. Iseti yesutikheyisi yeSamsonite lukhetho olufanelekileyo kuba baya kuba nakho ukwabelana ngengxowa ekhangelwe (iholide yaselwandle ithetha ukupakisha ukukhanya!)
$ 370 | Ivenkile yeKnot Registry
Iwayini kunye namaza
Umtshato oya elwandle kumakhadi? Phawula umnyhadala ngeli glasi yolwandle ye-chic ephefumlelweyo esetiweyo yeglasi. Ngalo lonke ixesha isibini sigalela iglasi ye-vino, baya kuphinda bacinge ngemini yabo yomlingo.
$ 120 | Iimpahla ezingaqhelekanga
Inye kuphela into yokuba isibini esithanda ukuhamba siya kuhlala sifuna imeko yangasese ehlala ihleli. Eli tyala lesitayile livela kwiimpawu zikaBric ezifihlakeleyo ezichaza into ethetha ukuba liza kuma uvavanyo lwexesha.
$ 240 | Ivenkile yeKnot Registry
Ukuprinta kweMephu eyenzelwe wena
Ukufumana isipho somtshato esiya kwindawo enomdla, kunzima ukugqithisa oku kuprinta imephu. Igcisa lenza umntu ngamnye kwimephu kwindawo apho aba babini badibana khona, bazibandakanya kwaye batshata.
Ukusuka kwi- $ 32 | Etsy
Xa uthenga isipho somtshato oya kuso, kunokuba nzima ukufumana into enesitayile kunye nesebenzayo. Ngethamsanqa, ezi zigqubuthelo zencwadana yokundwendwela ye-chic ziya kwenza iqhinga. Unokwenza amaqweqwe okwenza ngokweziqu kunye noonobumba bokuqala bamagama abatshatileyo-jonga nje kwangaphambili ukuba awukho okanye hayiamagama okugqibela azakutshintshaokanye ukuhlala unjalo.
$ 14 | Ivenkile yeKnot
Umhla Ibhokisi yasebusuku
Ukuthenga isibini esitsha? Ibhokisi yasebusuku yomhla sisipho somtshato esiya kubavumela ukuba bazame iqela lezinto ezintsha. Iqela elibizwa ngokuba yi-DateBox Club ngokufanelekileyo liya kuthumela abantu abasandul 'ukutshata ngebhokisi enye yasebusuku ngenyanga, kunye nemixholo yangaphambili ukusuka ku-Game Night ukuya kwi-Tie Dye DIY.
$ 120 iinyanga ezi-3 | Iklabhu yoMhla weBox
Ukuba umtshato oya kuyo kukuthatha kwenye indawo ngamanzi aqaqambileyo, cinga le seti yebhodi yokucheba elunxwemeni. Ibhodi yesonka kunye ne-coasters ziprintwe ngamaza aqhekezayo. Ngcono ngoku, ibhodi inokuba yeyakho ngamagama esi sibini kunye nenyanga yomtshato wabo.
Ukusuka kwi- $ 136 | Etsy
Ukuba abo batshatayo bangabahambi abanomdla, baya kuyithanda le dayari yokuhamba. Kwaye yeyiphi enye indlela ebhetele yokukhaba idayari yokuhamba ngaphandle kwetikiti lendiza elivela kumtshato wabo wokuya?
$ 15 | Iimpahla ezingaqhelekanga
Imigca yeLounger enemigca
Vumela isibini ukuba sizise loo holide yekhaya kunye nezi lounger ezinesitayile zelanga. Ifumaneka kwii-hues ezintandathu ezahlukeneyo, inye inokuthi ihambelane nesitayile sangasemva kwendlu.
$ 336 | Ivenkile yeKnot Registry
ukutshintsha igama lokugqibela kwilayisensi yokuqhuba
kwenzeka ntoni kwishower yomtshato
iikowuti zothando kwibhayibhile
kufanele ukuba izibini zihlala kunye ngaphambi komtshato